डोमाको सगरमाथा सपना- जब पुस्तकको पानाबाट पासाङ मनमा पसिन्
शेर्पा समुदायबाट सञ्चारकर्म ! यो त्यति धेरै सुनिने कुरा होइन । अझै महिला सञ्चारकर्मी शेर्पा समुदायबाट, यो झनै दुर्लभ कुरा हो । यो भन्दा पनि दुर्लभ काम गर्ने सपना हुर्किएको छ एक शेर्पा समुदायकी युवतीलाई, त्यो हो- पहिलो शेर्पा महिला पत्रकारको रुपमा सगरमाथा चढ्ने ।
भनिन्छ, सपना त्यो हो, जसले मानिसलाई सुत्न दिँदैन । डोमा शेर्पा त्यस्ती शेर्पा महिला पत्रकार हुन्, जसलाई सगरमाथा चढ्ने सपनाले पछिल्लो केही वर्ष निदाउन दिएको छैन । विगत ८ वर्षदेखि शेर्पा र खासगरी हिमाली समुदायका विविध पक्षलाई सञ्चारमाध्यममार्फत बाँकी विश्वलाई सार्वजनिक गर्दै आएकी शेर्पा अनलाइन, एफएम रेडियो र अहिले टेलिभिजनमा पनि सक्रिय छिन् ।
सजिलो छैन सगरमाथा सपना
झट्ट सुन्दा लाग्छ- शेर्पा समुदायबाट सगरमाथा चढ्नु के अनौठो कुरा भयो र ? तर, सुनेजस्तो सजिलो छैन सगरमाथा सपना । शारीरिक तन्दुरुस्टीसँगै हिम्मत चाहिन्छ । तालिम चाहिन्छ र चाहिन्छ आत्मविश्वास पनि । यी सबैभन्दा ठूलो कुरा पैसा चाहिन्छ त्यो पनि ४० लाखभन्दा बढी । सगरमाथा चढ्न जति भौतिक जोखिम छ, त्योभन्दा बढी आर्थिक जोखिम छ । सामान्य अवस्थाको मानिसलाई ४० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा पार्नु सजिलो छैन । यसर्थ, सामान्य मानिसलाई सगरमाथाको चुचुरो पुग्नाभन्दा मुस्किल छ आर्थिक अभावको चुचुरो चढ्न ।
रोयल्टी र आरोहणका लागि चाहिने आवश्यक सरसामान समेत उनले कम्तिमा ४० लाख खर्च गर्न सक्नुपर्छ । डोमासँग अहिले त्यति रकम छैन । तर, उनी आवश्यक रकम उठाउन शेर्पा समुदायमा रहेका विभिन्न संघसंस्थाहरुमा सक्रिय छिन् । सहयोगको लागि स‌ंघसंस्था धाउनेदेखि विभिन्न च्यारिटीहरु सञ्चालन गर्न डोमा अहिले व्यस्त छिन् । उनलाई अझै पनि सहयोगी हातहरुको खाँचो छ ।
डोमाले सगरमाथा चढ्नको लागि आफ्नो तयारी सुरु गरिसकेकी छन् । यो वर्ष अप्रिल महिनामा उनले सगरमाथा चढ्न हिम्मतिला पाइला बढाउने छिन् । यसको लागि उनी अहिले शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि वाल क्लाइम्बिङ, रक क्लाइम्बिङ र अन्य अभ्यासहरुमा व्यस्त छिन् ।
पासाङसँग जोडिएको सपना
हरेक शेर्पाले सगरमाथा चढ्ने सपना देख्दैनन् । अझ उनको बस्तीतिर मानिसहरु सगरमाथा चढ्नेबारे कमै सोच्छन् । ‘सदरमुकामबासी भएका कारण अन्य क्षेत्रमा पनि अवसर भएर होला हाम्रोतिर सगरमाथा आरोहणमा जाने त्यति चलन छैन,’ डोमा सुनाउँछिन् । सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिका-२, सालाबेसीकी स्थायी बासिन्दा डोमा भन्छिन्, ‘हाम्रोतिर हिमाल आरोहणभन्दा बरु राजनीति, व्यापार व्यवसाय र अरु नै पेशामा संलग्न हुने धेरै हुनुहुन्छ ।’
‘मैले स्कूले जीवनमा पासाङ ल्हामू शेर्पाबारे पढेँ । सगरमाथा चढ्ने सपनासँग तार त्यतिबेलैबाट जोडियो,’ डोमा भन्छिन्, ‘मलाई सानै उमेरमा नै कतिबेला सगरमाथा पुगौंजस्तो लाग्थ्यो, तर बालसपना हुर्किँदै यथार्थमा परिणत गराउन मैले धेरै समय कुर्नुपर्‍यो ।’ पाठ्यक्रममा रहेको पासाङको जीवनीले उनलाई अनौठो झंकार दियो । उनले स्कूले जीवनमै पुस्ककको पानाबाट सपना आयात गरिन् र मनको कुनामा असाध्यै हेरचाह गरेर सपनालाई आजसम्म ज्यूँदै राेखेकी छन् । विद्यालय जीवन सकाएर कलेज पढ्न थालेपछि भने उनको सोचाई केही परिवर्तन भयो । कक्षा १२ सम्म व्यवस्थापन पढेकी डोमाले पत्रकारितातिर मोडिन् आफूलाई ।
उनलाई लाग्यो, सगरमाथासँग जोडिएका शेर्पा समुदायको धेरै विषय बाहिर ल्याउन बाँकी छ । उनले केही समय सगरमाथा सपनालाई मनको कोमामा धकेलिदिइन् । यसबीच उनले हिमाली समुदायका नारी सशक्तिकरणमा सहयोग पुग्ने समाचार लेखिन् । आफ्नो समुदायभित्र रहेका कलासंस्कृति, रीतिरिवाज र जीवनशैलीलाई अक्षर र आवाजबाट जनमानसमा पुर्‍याइन् । उनको कर्मलाई मूल्यांकन गर्दै भन्न सकिन्छ- डोमाले खासमा शेर्पा समुदायको लागि मिसन पत्रकारिता नै गरिन् ।
शेर्पा भन्नेबित्तिकै मानिसहरुको अर्कै धारणा हुन्थ्यो हिमाल चढ्ने, पर्यटन व्यवासय गर्ने, विदेश जाने आदिआदि । शेर्पा समुदायबाट पुरुषहरु पनि औंलामा गन्न सकिने मात्र सहभागी थिए जतिबेला डोमा सञ्चारकर्ममा लागेकी थिइन् । हाल शेफर्ड कलेजमा मिडिया टेक्नोलोजीमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेकी डोमा भन्छिन्- अब हामी शेर्पा समुदायबाट बाहिर आउनुपर्छ ।
कोमाबाट बाहिर सगरमाथा सपना
सपना सधैं कोमामा रहँदैन । उनले पछिल्लो समय सगरमाथा सपनालाई कोमाबाट जनरल वार्डमा सारेकी छिन् । उनको सगरमाथा चढ्ने सपना यही अप्रिलमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेछ र उनी दृढ अठोटका साथ सगरमाथा चढिरहेकी हुनेछिन् ।
डोमा भन्छिन्, ‘सगरमाथा आरोहण निकै चूनौतिपुर्ण र जोखिम काम हो । सानो गल्तीले ज्यान गुम्न सक्छ ।’ तर उनलाई थाहा छ चुनौती र जोखिमसँग खेल्न नसक्ने जीवन पनि के जीवन ? ‍औसत जीवन त सबैले बाँचेका छन् । उनले दृढ अठोट गरिसकेकी छिन्- सगरमाथाको चुचुरो पुग्ने पहिलो शेर्पा महिला पत्रकारको नाम डोमा शेर्पा हुनेछ ।
यो अठोटलाई कार्यरुप दिन उनले पूर्व अभ्यास र हाइ अल्टिच्यूडको सामना गर्न डोमाले ६१८९ मिटर उचाइको आइल्याण्ड पिकको सफल आरोहण गरिसकेकी छिन् । ‘आइल्याण्ड पिक चढेँ, अब मेरो सपनाको उचाई बढिरहेको छ, त्यो दिन बाँकी छैन, जतिबेला म ८८४८ मिटर अग्लो सगरमाथाको शीरमा हुनेछु ।’
फेरि पनि शेर्पाकै कुरा
सगरमाथा आरोहण अभियानमा लागेकी सेफर्ड कलेजकी डोमा शेर्पालाई कलेज तथा विद्यार्थीहरुको तर्फबाट सगरमाथाको सफल आरोहणको शुभकामनासहित झण्डा हस्तान्तरण गर्दै क्याम्पस प्रमुख डा. सुरेश आचार्य ।
डोमाको सगरमाथा सपना शेर्पा समुदायको रहस्यउद्घाटन गर्न पनि जोडिनेछ । एडमण्ड हिलारीसँगै पहिलोपटक सगरमाथा पाउ राख्न सफल तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको भूमिका कस्तो थियो ? सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेकेर इतिहास लेखाउनेहरुको सपनासँग शेर्पा समुदायको योगदान कसरी जोडिएको छ ? डोमाले यी प्रश्नहरुको उत्तर केलाउन सगरमाथा आरोहणसँग अर्को काम पनि गर्दैछिन् डकुमेन्ट्री निर्माण ।
‘सगरमाथा आधार शिविरदेखि चुचुरोसम्म पुग्दा स्वदेशी तथा विदेशी आरोहण दललाई सफल बनाउन शेर्पाहरुले ज्यानको बाजी लगाएर कसरी योगदान दिन्छन् र कस्तो कस्तो संघर्ष गर्छन् भन्ने तथ्यलाई म डकुमेन्ट्रीमार्फत बाहिर ल्याउन चाहन्छु,’ डोमाले भनिन् । भनिन्छ, इतिहास जित्नेहरुको मात्रै लेखिन्छ । यो क्रममा कयौं पात्रहरु अन्यायमा हुन्छन् । न्याय सधै‌ अन्यायको अँधेरोमा हराउन सक्दैन । डोमाले शेर्पा समुदायको सगरमाथासँग जोडिएको रहस्य उद्घाटन गर्ने सपना पनि कम महत्वपूर्ण छैन ।
शेर्पा सञ्चार समूहकी निवर्तमान अध्यक्ष डोमा आदिबासी जनजाती युवा महासंघको महिला उपाध्यक्ष पनि हुन् । समाजसेवामा समेत सक्रिय डोमाको सगरमाथा सपनासँग मूल प्रवाहबाट बाहिर पारिएको समुदायको एउटा सुषुप्त सपना ब्युँझाउने प्रयास पनि हो । ‘म सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नेछु र पासाङ ल्हामूले जन्माइदिएकी यो सपनालाई पूरा गरेरै छाड्छु,’ डोमाले आफ्नो अडिग संकल्प सुनाइन् ।
युएन महासभाः यी हुन् यसवर्ष छलफल हुनसक्ने ५ सम्भावित विषयहरु
प्रवास, फिचर पोस्ट
जब क्यानडामा लाखेनाच र नेपाली लोक गीत घन्कियो …
पेटीकोट लगाएर अर्धनग्न प्रदर्शन गर्नेले राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान विभुषणबारे यसो भनिन्
क्यानाडामा हुँदै गरेको हिमालयन मेला तथा यसका सहयोगी हातहरु
‘बेरोजगार हुनुहुन्छ ! चिन्ता नगर्नुस्’
नरसंहारमा परिवार गुमाएकी आमाले यसरी बसाईन् देशकै नमूना आधुनिक गाउँ
‘नयाँ पुस्ताले खोजेअनुसार राजनीतिमा नयाँ स्वाद दिन सक्नुपर्छ’
ट्युसन पढ्न गएका निशान फर्किएनन्, यस्तो छ अपहरणको इतिवृत्तान्त
ओसामा बिन लादेनबारे उनकी आमाको थप खुलासा
पाकिस्तानका ११ वर्षीय प्रोफेसर जो सुधार्दै छन् विश्वमा देशको छवि
अतिवाद र सैन्यत्रासको छायाँमा पाकिस्तानी चुनाव
माफियाको मिसन सिटामोलमा कमिसन ! (फोटोफिचर)
संसारकै धनी जेफ बेजोस : जो कुनैबेला ग्यारेजमा काम गर्थे
आकाशे पानी संकलन र यसको उपयोगिता, आवश्यकता कि बाध्यता ?
को हुन् २५ वर्षीय मन्त्री सैयद सद्दिक ?
दाहाल दम्पतीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा भिडभाड, हेर्नुहोस् तस्बिरहरु
प्रदेश, प्रदेश ३, फिचर पोस्ट
ह्विल चेयरका साथीहरुसँग नयाँ शक्तिको ‘दही-चिउरा’ र सरसफाई (फोटोकथा)
खेलकुद, फिचर पोस्ट, विश्वकप
इतिहास : डिफेन्डिङ च्याम्पियनको अहंकारले बिग्रिएको खेल, जर्मनी पनि अछुतो रहेन
चियावाला बाबुकी पाइलट छोरी